विदेशीहरूलाई दया देखाउन नबिर्सनुहोस्—हिब्रू १३:२ | अध्ययन
“अतिथि-सत्कार गर्न नबिर्स।”—हिब्रू १३:२.
गीत: १२४, ७९
विदेशीहरूप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणलाई किन छाँटकाँट गर्नुपर्ने हुन सक्छ?
रूथसित व्यवहार गर्दा बोअजले कसरी विदेशीहरूप्रति यहोवाको जस्तै दृष्टिकोण राखे?
हामी कसरी विदेशीहरूलाई दया देखाउन सक्छौं?
१, २. (क) आज धेरैजसो विदेशीहरूले कस्ता चुनौतीहरू सामना गर्छन्‌? (शीर्षकमाथिको तस्बिर हेर्नुहोस्) (ख) प्रेषित पावलले ख्रीष्टियनहरूलाई कुन कुरा सम्झाए? अनि कस्ता प्रश्नहरू उठ्‌छन्‌?
लगभग ३० वर्षअघि घानाका ओसा  युरोप आएका थिए। त्यतिबेला तिनी यहोवाका साक्षी थिएनन्‌। तिनी भन्छन्‌: “युरोपका मानिसहरूलाई मेरो कुनै वास्ता छैन भनेर मैले बुझिहालें। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्केपछि जिन्दगीमा पहिलो चोटि जाडो भनेको कस्तो हुन्छ भनेर थाह पाएँ। यहाँको मौसम देखेर म तर्सिएँ र रुन थालें।” भाषा पनि राम्ररी नजानेको हुँदा तिनले एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म राम्रो जागिर पाउन सकेनन्‌। अनि आफ्नो परिवारबाट टाढा भएकोले तिनले असाध्यै एक्लो महसुस गरे र घरको सम्झनाले तिनलाई सतायो।
२ तपाईं पनि त्यस्तै अवस्थामा पर्नुभएको भए अरूले कस्तो व्यवहार गरेको आशा गर्नुहुन्थ्यो, सोच्नुहोस् त! तपाईं जुनसुकै देशबाट आउनुभएको होस् अनि तपाईंको छालाको रङ्‌ग जस्तोसुकै होस्, राज्यभवनमा जाँदा अरूले न्यानो स्वागत गऱ्यो भने के तपाईंलाई खुसी लाग्नेछैन र? बाइबलमा साँचो ख्रीष्टियनहरूलाई परदेशीहरूको “अतिथि-सत्कार गर्न नबिर्स” अर्थात्‌ विदेशीहरूलाई दया देखाउन नबिर्स भनी आग्रह गरिएको छ। (हिब्रू १३:२) त्यसैले आउनुहोस्, यी प्रश्नहरू विचार गरौं: विदेशीहरूप्रति यहोवा कस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ? विदेशीहरूप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणलाई किन छाँटकाँट गर्नुपर्ने हुन सक्छ? अनि विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो मण्डलीमा सजिलो महसुस गराउन हामी के गर्न सक्छौं?
विदेशीहरूप्रति यहोवा कस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ?
३, ४. प्रस्थान २३:९ अनुसार इस्राएलीहरूले परदेशीहरूलाई कस्तो व्यवहार गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो? किन?
३ यहोवाले आफ्ना मानिसहरूलाई मिश्रबाट छुटाएर ल्याउनुहुँदा तिनीहरूसँगै थुप्रै गैर-इस्राएलीहरू पनि आएका थिए। त्यसैले ती गैर-इस्राएलीहरूप्रति दया देखाउन उहाँले इस्राएलीहरूलाई विभिन्न नियमहरू दिनुभयो। (प्रस्थ. १२:३८, ४९; २२:२१) परदेशीहरूले प्रायजसो सुविधाहरू नपाउने हुँदा यहोवाले उनीहरूको लागि मायालु प्रबन्ध मिलाउनुभयो। त्यस्तै एउटा प्रबन्ध, सिलाबाला बटुल्ने थियो।—लेवी १९:९, १०.
४ यहोवाले इस्राएलीहरूलाई परदेशीहरूको आदर गर भन्ने आज्ञा दिनुभएन, बरु तिनीहरूको भावना बुझ्न आग्रह गर्नुभयो। (प्रस्थान २३:९ पढ्‌नुहोस्) इस्राएलीहरूले “प्रवासीको मन” बुझेका थिए अर्थात्‌ प्रवासी हुँदा कस्तो महसुस हुन्छ भनेर तिनीहरूलाई थाह थियो। तिनीहरू दास बन्नअघि पनि मिश्रीहरूले हेप्थे होलान्‌। किनभने मिश्रीहरू आफूलाई ठूलो जाति ठान्थे अनि इस्राएलीहरूको धर्मलाई तुच्छ ठान्थे। (उत्प. ४३:३२; ४६:३४; प्रस्थ. १:११-१४) इस्राएलीहरूले प्रवासीको रूपमा दुःखदायी जीवन बिताएका थिए। तर यहोवा भने तिनीहरूले परदेशीहरूलाई “स्वदेशीजस्तै” व्यवहार गरेको चाहनुहुन्थ्यो।—लेवी १९:३३, ३४.
५. विदेशीहरूप्रति यहोवाले जस्तै चासो देखाउन हामीलाई केले मदत गर्नेछ?
५ अहिले हाम्रा मण्डलीका सभाहरूमा आउने विदेशीहरूलाई पनि यहोवा त्यस्तै चासो राख्नुहुन्छ भनेर हामी ढुक्क हुन सक्छौं। (व्यव. १०:१७-१९; मला. ३:५, ६) तिनीहरूलाई अरू मानिसले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्छन्‌ अनि भाषाको कारण तिनीहरूले विभिन्न कठिनाइ झेलिरहेका हुन सक्छन्‌। तिनीहरूले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई विचार गऱ्यौं भने तिनीहरूलाई दया देखाउन अनि तिनीहरूको पीडा महसुस गर्न प्रयास गर्नेछौं।—१ पत्रु. ३:८.
विदेशीहरूप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणलाई छाँटकाँट गर्नुपर्छ कि?
६, ७. प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूले आफ्नो मनमा जरा गाडेको पूर्वाग्रह हटाउन सिके भनेर कुन घटनाले देखाउँछ?
६ यहूदीहरूको मनमा विदेशीहरूप्रतिको पूर्वाग्रहले जरा गाडेको थियो। तर प्रथम शताब्दीका ख्रीष्टियनहरूले त्यस्तो पूर्वाग्रह हटाउन सिके। इस्वी संवत्‌ ३३ पेन्तिकोसमा यरूशलेमका यहूदीहरूले विभिन्न राष्ट्रबाट आएका मानिसहरूप्रति दया देखाए। तिनीहरू धर्म परिवर्तन गरेर भर्खरै ख्रीष्टियन भएका थिए। (प्रेषि. २:५, ४४-४७) यहूदी ख्रीष्टियनहरूले अरू राष्ट्रबाट आएका सङ्‌गी उपासकहरूलाई दया देखाएको घटनाबाट तिनीहरूले “अतिथि-सत्कार” देखाउनुको साँचो अर्थ बुझेका थिए भन्ने प्रस्ट हुन्छ। हो, तिनीहरूले विदेशीहरूलाई दया देखाए।
७ तर सुरु-सुरुतिरको ख्रीष्टियन मण्डली बढ्‌दै जाँदा कसै-कसैप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखियो। ग्रीकभाषी यहूदीहरूले आफ्नो माझ भएका विधवाहरूको बेवास्ता भइरहेको गुनासो गरे। (प्रेषि. ६:१) ती सुरु-सुरुका ख्रीष्टियनहरूको बेग्लाबेग्लै पृष्ठभूमि भएको हुँदा आपसमा केही तनाव भएको हुन सक्छ। कसैको पनि भेदभाव नगरियोस् भनेर प्रेषितहरूले सात जना पुरुषलाई नियुक्त गरे। त्यसैले त्यस्तो तनाव कम गर्न प्रेषितहरूले ग्रीक नाम भएका सात जना पुरुषलाई नियुक्त गरेका हुन सक्छन्‌।—प्रेषि. ६:२-६.
८, ९. (क) आफ्नो मनमा पूर्वाग्रह वा जातीय घमन्ड भएको कुरा कसरी देखिन सक्छ? (ख) हामीले आफ्नो मनबाट कुन कुरा जरैसमेत उखेल्नुपर्छ? (१ पत्रु. १:२२)
८ आफूले चाल पाएका होऔं या नहोऔं, हामी सबैलाई आफ्नो रहनसहनले एकदमै असर गरेको हुन्छ। (रोमी १२:२) त्यति मात्र होइन, हाम्रा छिमेकी, सहकर्मी वा स्कुलका साथीहरूले बेग्लै पृष्ठभूमि, जाति वा रङका मानिसहरूलाई हेपेर कुरा गरेको सुन्छौं होला। यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहारले हामीलाई कत्तिको असर गर्छ? अरूले हाम्रो जातिबारे खिल्ली उडाउँदा हामी के गर्छौं? जस्तै, कसैले हाम्रो रहनसहनको कुनै पक्षबारे नानाभाँती कुरा गरेर जिस्क्याउँदा कस्तो लाग्छ?
९ कुनै बेला प्रेषित पत्रुसले गैर-यहूदीहरूप्रति पूर्वाग्राही सोचाइ राखेका थिए। तर तिनले यस्तो नकारात्मक सोचाइ बिस्तारै हटाउँदै लान सिके। (प्रेषि. १०:२८, ३४, ३५; गला. २:११-१४) त्यसरी नै, हामीले पनि आफूमा पूर्वाग्रह वा जातीय घमन्ड भएको चाल पायौं भने त्यसलाई मनबाट जरैसमेत उखेल्न कडा प्रयास गर्नुपर्छ। (१ पत्रुस १:२२ पढ्‌नुहोस्) हामी जुनसुकै जातिको भए तापनि त्रुटिपूर्ण छौं। त्यसैले हामीमध्ये कोही पनि उद्धार पाउन योग्यका छैनौं। (रोमी ३:९, १०, २१-२४) त्यसो हो भने आफूलाई अरूभन्दा ठूलो ठान्न मिल्छ र? (१ कोरि. ४:७) हामीले पनि प्रेषित पावलको जस्तै दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। तिनले सङ्‌गी अभिषिक्त ख्रीष्टियनहरूलाई यस्तो सल्लाह दिए: “अबदेखि तिमीहरू पक्कै पनि अपरिचित जाति अनि परदेशीहरू होइनौ, बरु . . . परमेश्वरको घरानाका सदस्यहरू हौ।” (एफि. २:१९) बेग्लै पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूप्रतिको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हटाउन निष्कपट प्रयास गऱ्यौं भने नयाँ व्यक्तित्व धारण गर्न हामीले पक्कै मदत पाउनेछौं।—कल. ३:१०, ११.
विदेशीहरूप्रति कसरी दया देखाउन सक्छौं?
१०, ११. मोआबी रूथसित व्यवहार गर्दा बोअजले कसरी विदेशीहरूप्रति यहोवाको जस्तै दृष्टिकोण राखे?
१० विदेशीहरूप्रति यहोवा कस्तो दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ भनेर बोअजले राम्ररी बुझेका थिए। त्यो कुरा तिनले मोआबी रूथसित व्यवहार गर्दा देखाए। कटनीको बेला आफ्नो खेतको निगरानी गर्न आउँदा बोअजले आफ्ना खेतालाहरूको पछि-पछि एउटी विदेशी स्त्री सिलाबाला बटुल्न निकै खटिरहेकी देखे। त्यस स्त्रीसित सिलाबाला बटुल्ने पूरा अधिकार थियो। तैपनि उनले सिलाबाला बटुल्न अनुमति मागेकी कुरा बोअजले सुने। यो सुनेपछि बोअजले उनलाई अन्नका बिटाहरूका बीच-बीचमा पनि सिलाबाला बटुल्न अनुमति दिए।—रूथ २:५-७, १५, १६ पढ्‌नुहोस्।
११ विदेशी भएकी हुँदा रूथले झेल्नुपर्ने खतरनाक अवस्थाबारे बोअज चिन्तित थिए। बोअजले रूथसित गरेको कुराकानीबाट यो स्पष्ट हुन्छ। आफ्नो खेतमा काम गरिरहेका खेतालाहरूले दुःख नदेऊन्‌ भनेर तिनले रूथलाई आफ्ना ठिटीहरूसँगै बस्न बोलाए। आफूले ज्यालामा लगाएका खेतालाहरूलाई जस्तै रूथलाई पनि खानेकुरा र पानीको व्यवस्था गरिदिए। साथै, बोअजले ती विदेशी रूथसित हेपेर कुरा गरेनन्‌, बरु उनलाई सुरक्षित महसुस गराए।—रूथ २:८-१०, १३, १४.
१२. भर्खरै सत्य सिक्न थालेका विदेशीहरूप्रति दयालु व्यवहार गर्दा कस्तो सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ?
१२ रूथले आफ्नी सासू नाओमीप्रति देखाएको निःस्वार्थ प्रेमले बोअजको मन छोयो। त्यति मात्र होइन, रूथ यहोवाको उपासक बनेको कुरा थाह पाउँदा बोअज खुसी भए। रूथ “इस्राएलका परमेश्वरको छत्रछायामुनि शरण लिन” आएकी थिई। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यहोवा अटल प्रेम देखाउनुहुन्छ। त्यसैले बोअजले पनि रूथप्रति त्यस्तै प्रेम देखाइरहेका थिए। (रूथ २:१२, २०; हितो. १९:१७) त्यसरी नै, आज हाम्रो दयालु व्यवहारले “सबै किसिमका मानिसहरू”-लाई सत्य सिक्न अनि यहोवा तिनीहरूलाई साँच्चै माया गर्नुहुन्छ भनेर महसुस गर्न मदत गर्छ।—१ तिमो. २:३, ४.
के हामी राज्यभवनमा आउने नयाँ व्यक्तिहरूलाई न्यानो अभिवादन गर्छौं? (अनुच्छेद १३, १४ हेर्नुहोस्)
१३, १४. (क) राज्यभवनमा आउने विदेशीहरूलाई अभिवादन गर्न हामीले किन प्रयास गर्नुपर्छ? (ख) अर्कै रहनसहनका मानिसहरूसित कुरा गर्न अप्ठ्‌यारो लाग्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ?
१३ भर्खरै सत्य सिक्न थालेका विदेशीहरूलाई राज्यभवनमा न्यानो अभिवादन गरेर हामी तिनीहरूप्रति दया देखाउन सक्छौं। हामीले याद गरेका छौं होला, आप्रवासीहरू अर्थात्‌ विदेशबाट भर्खरै बसाइँ सरेर आएका कोही-कोही मानिसहरू लाज मान्छन्‌ अनि अरूसित कुरा नगरी एक्लै बस्छन्‌। आफू हुर्केको वातावरण अनि सामाजिक पृष्ठभूमिले गर्दा तिनीहरूलाई अरू जाति वा देशको मानिसभन्दा आफू सानो छु जस्तो लाग्न सक्छ। त्यसैले तिनीहरूसित मित्रैलो व्यवहार गर्न अनि निष्कपट चासो देखाउन हामी अग्रसर हुनुपर्छ। तपाईंको भाषामा JW ल्याङ्‌ग्वेज एप छ भने नयाँ व्यक्तिहरूलाई तिनीहरूको मातृभाषामा अभिवादन गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ।—फिलिप्पी २:३, ४ पढ्‌नुहोस्।
१४ हुन त अर्कै रहनसहनका मानिसहरूसित कुरा गर्न तपाईंलाई अप्ठ्‌यारो लाग्न सक्छ। यस्तो लागेमा तपाईं आफूबारे केही बताएर कुराकानी थाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई एकअर्काको रहनसहन मिल्दैन जस्तो लाग्ला र कतिपय कुरा साँच्चै मिल्दैन पनि होला। तर कुरा गर्दै जानुभयो भने मिल्ने कुराहरू धेरै पाउनुहुनेछ। हरेक रहनसहनको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुवै हुन्छ।
सबैलाई सजिलो महसुस गराउनुहोस्
१५. नयाँ ठाउँमा घुलमिल हुन प्रयास गरिरहेकाहरूप्रति धीरजी हुन हामीलाई कुन कुराले मदत गर्नेछ?
१५ मण्डलीमा अरूलाई सजिलो महसुस गराउन चाहनुहुन्छ भने इमानदार भई आफूलाई सोध्नुहोस्, ‘यदि म विदेशमा भएको भए अरूले मसित कस्तो व्यवहार गरेको चाहन्थें?’ (मत्ती ७:१२) नयाँ ठाउँमा घुलमिल हुन प्रयास गरिरहेकाहरूप्रति धीरजी हुनुहोस्। सुरुमा हामीलाई तिनीहरूको सोचाइ वा प्रतिक्रिया बुझ्न गाह्रो होला। तिनीहरू हाम्रो रहनसहनअनुसार चलेको आशा गर्नुभन्दा तिनीहरू जस्तो छन्‌, त्यस्तै अवस्थामा स्वीकारे कसो होला?—रोमी १५:७ पढ्‌नुहोस्।
१६, १७. (क) अर्कै रहनसहनका मानिसहरूसित नजिक हुन हामी कस्ता प्रयास गर्न सक्छौं? (ख) विदेशबाट भर्खरै बसाइँ सरेर हाम्रो मण्डलीमा आएकाहरूलाई कस्ता व्यावहारिक मदत दिन सक्छौं?
१६ विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको ठाउँ र रहनसहनबारे सिक्यौं भने तिनीहरूसित कुराकानी गर्न हामीलाई सजिलो लाग्न सक्छ। आफ्नो मण्डली वा इलाकामा भएका कतिपय मानिसहरूको रहनसहनबारे हामीलाई राम्ररी थाह छैन। त्यस्ता मानिसहरूबारे अझ राम्ररी बुझ्ने उद्देश्यले थप अनुसन्धान गर्न पारिवारिक उपासनाको बेला समय छुट्टयाउन सक्छौं। बेग्लै पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूसित नजिक हुने अर्को तरिकाचाहिं तिनीहरूलाई खाना खान बोलाउनु हो। “अन्यजातिहरूले पनि प्रभुमा विश्वास गरून्‌ भनेर” यहोवाले “ढोका खोलिदिनुभयो।” त्यसैले “एउटै विश्वास हुने” विदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि के हामीले पनि आफ्नो ढोका खोल्नु पर्दैन र?—प्रेषि. १४:२७; गला. ६:१०; अय्यू. ३१:३२.
विदेशबाट भर्खरै बसाइँ सरेर आएका मानिसहरूप्रति दयालु हुँदै के हामी अतिथि-सत्कार गर्छौं? (अनुच्छेद १६, १७ हेर्नुहोस्)
१७ विदेशबाट भर्खरै बसाइँ सरेको परिवारसित समय बितायौं भने तिनीहरू हाम्रो रहनसहनमा घुलमिल हुन कत्तिको प्रयास गर्दै छन्‌ भनेर राम्ररी बुझ्नेछौं। अनि भाषा सिक्न तिनीहरूलाई केही व्यावहारिक मदत चाहिन्छ होला। साथै उपयुक्त घर वा जागिर पाउन सहयोग गर्ने स्थानीय एजेन्सीहरूबारे तिनीहरूलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ कि? यस्तो सानो प्रयासले पनि सङ्‌गी उपासकको जीवनमा ठूलो फरक पार्न सक्छ।—हितो. ३:२७.
१८. विदेशबाट भर्खरै बसाइँ सरेकाहरूले आदर देखाउने र धन्यवाद व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा कसको उदाहरण अनुकरण गर्न सक्छन्‌?
१८ विदेशबाट भर्खरै बसाइँ सरेकाहरूले पनि नयाँ ठाउँको रहनसहनमा घुलमिल हुन सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा रूथले राम्रो उदाहरण बसालिन्‌। पहिलो कुरा, उनले सिलाबाला बटुल्ने अनुमति मागेर नयाँ ठाउँको रहनसहनप्रति आदर देखाइन्‌। (रूथ २:७) अरूले आफ्नो निम्ति सबै कुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण उनले राखिनन्‌। दोस्रो कुरा, आफूप्रति देखाइएको दयाको लागि उनले तुरुन्तै धन्यवाद व्यक्त गरिन्‌। (रूथ २:१३) विदेशबाट भर्खरै बसाइँ सरेकाहरूले पनि यस्तो राम्रो मनोवृत्ति देखाउनु पर्छ। यसो गर्दा तिनीहरूलाई स्थानीय बासिन्दा र सङ्‌गी उपासकहरूले अझ आदर गर्नेछन्‌।
१९. हामीमाझ भएका विदेशीहरूलाई किन स्वागत गर्नुपर्छ?
१९ यहोवाले आफ्नो असीम अनुग्रहले गर्दा विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुन्ने मौका दिइरहनुभएको छ। यो देख्दा हामी साँच्चै रमाउँछौं। आफ्नै देशमा भएको भए ती विदेशीहरूले बाइबल अध्ययन गर्ने वा यहोवाका सेवकहरूसित यसरी विनारोकटोक सङ्‌गत गर्ने मौका पाउने थिएनन्‌ होला। तर अहिले तिनीहरूले हामीसित सङ्‌गत गर्ने मौका पाएका छन्‌। त्यसैले तिनीहरूलाई हामीमाझ विदेशीहरूजस्तो महसुस नगराउन हामीले प्रयास गर्नुपर्दैन र? हामी तिनीहरूलाई आर्थिक वा अन्य व्यावहारिक तवरमा धेरै मदत दिन सक्दैनौं होला। तैपनि दया देखाउँदा यहोवाले तिनीहरूप्रति जस्तो प्रेम देखाउनुहुन्छ, त्यस्तै प्रेम देखाइरहेका हुन्छौं। त्यसैले “परमेश्वरको देखासिकी” गर्दै हामीमाझ भएका विदेशीहरूलाई स्वागत गर्न यथासक्दो गरौं!—एफि. ५:१, २.
^  (अनुच्छेद १) नाम परिवर्तन गरिएको छ।